Ход полевых работ: посевная близится к завершению — Картофельная Система
Horu-marinta shaqada: abuuridda u dhowdahay
Sida laga soo xigtay xogta hawlgalka ee agro-warshadaha cufnaanta maareynta ee wakaaladaha xubnaha ee Xiriirka Ruushka, ilaa Juun 1, 2020, waddanka oo dhan, abuuridda guga waxaa lagu qabtay aagga 47,3 milyan ha, ama 91,1% aagga saadaaliyay (2019 million ha sanadka 47).
Oo ay ku jiraan abuuridda gu'ga ee Degmooyinka Federalka Koonfurta ee aagga 4,9 milyan ha, ama 86,5% saadaasha, ee Degmooyinka Waqooyiga Caucasus Federal - 1,7 milyan ha, ama 95,1% saadaasha, ee Bartamaha Dowladda Dhexe. 8,9 milyan oo haad ama 94,4% saadaalinta, degmada Volga Federalka - 14,8 milyan ha ama 95,1% saadaasha, Degmooyinka Federalka Siberiya - 11,4 milyan ha ama 93,6% saadaasha, Degmooyinka Federal-ka Ural - 3,8 milyan hektar ama 88,5% saadaasha, ee Degmooyinka Waqooyi-Galbeed ee Federalka - 291,9 kun hektar ama 63,3% saadaasha, ee Degmooyinka Degmooyinka Bariga Fog - 1,4 milyan hektar ama 57,4 , XNUMX% saadaasha.
Dalaggii guga ee dalka oo dhan waxaa lagu beeray dhul dhan 27,9 milyan hektar, ama 95,7% aagga la saadaaliyay (2019 - 27,1 milyan hektar).
Kuwaas, sarreenka guga ayaa lagu beeray dhul 12,1 milyan hektar ah ama 99,3% aagga la saadaaliyay, galleyda - 7,6 milyan hektar ama 96,5% aagga la saadaaliyay, galley hadhuudh ah - 2,8 milyan hektar ama 103,1, 182,5% aagga la saadaaliyay, bariis - 92,5 kun ha ama XNUMX% aagga la saadaaliyay.
Xididdada sokorta (warshad) waxaa lagu beeray aag ah 930,5 kun ha, ama 98,5% aagga la saadaaliyay.
Flax flax dhaadheer ayaa lagu beeray aag 44,2 kun ha ama 90,9% aagga la saadaaliyay.
Sunflower waxaa lagu beeray aag ah 7,8 milyan oo ha, ama 95,7% aagga la saadaaliyay.
Kufsiga guga waxaa lagu beerayaa aag dhan 1,1 milyan hektar, ama 87,2% aagga la saadaaliyay.
Soybean waxaa lagu beeray aag ah 2,4 milyan ha, ama 74,9% aagga la saadaaliyay.
Baradhadu ee shirkadaha ganacsiga iyo beeralleyda (beeralleyda) beero ayaa lagu beeray dhul ah 253,4 kun oo hektar, ama 82% aagga la saadaaliyay.
Khudaarta ka ganacsada beeraha iyo beeralleyda beeroleyda waxaa lagu beeray aag dhan 150,9 kun hektar, ama 81,4% aagga la saadaaliyay.
Tags: Wasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushkabeerto baradhada sanadka 2020shaqada guga
Qaybta barafka ee suuqa ayaa kordhay
Yara waxay qaadaysaa tillaabooyin looga hortagayo gaajada kadib Covid 19
Iibsashada bacriminta macdanta ee Ruushka ayaa kordhay 9,3%
Natiijooyinka hordhaca ah ee 2020 iyo tilmaamaha istiraatiijiga ah ee horumarinta warshadaha dalagga: kulan ka dhacaya "Dayrta Dahabiga ah ee 2020"
"YUGAGRO" waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya agro-warshadaha
Ololaha Suuqaynta Saliidda baradhada AHDB
Wareejin khudradda ayaa laga bilaabi doonaa Koonfurta Ural-ka
Yukreeniyaan waxay lahaan doontaa baradhada ku filan ilaa dayrta
PVMI: Soosaarida “Noocyo” Noocyada baradhada